directory & ဝယ်သိကောင်းစရာများ
ပွင့်လင်းမိုဘိုင်း Menu ကို
ပင်မစာမျက်နှာ » ခရစ်စမတ်၏အရောင်များကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်နိုင်သောနာရီလေးခု
ဒီဇင်ဘာလတွင် 24 2019
ယခုအားလပ်ရက်များစတင်ချိန်တွင်တိုတောင်းသောနေ့ရက်များ၏အမှောင်ထုသည်အလင်းရောင်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများသာမကအစိမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်အမြောက်အများနှင့်ပါတိုက်လှန်နေရသည်။ ရုပ်ဆိုးပြီးမကောင်းသောခရစ္စမတ်ဆွယ်တာများထံမှကြော့ရှင်းသောစားပွဲအစီအစဉ်များအထိ၊ ဤအရောင်များသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းတည်ရှိသည်။ သူတို့ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှာအရာအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရှာဖွေနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီအကြံပြုချက်လေးချက်ကသစ်ပင်အောက်မှာပျော်စရာကောင်းပါလိမ့်မယ်။
Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition (အရင်းအမြစ်)
ယခုနှစ်အစောပိုင်းက Montblanc သည်၎င်း၏အောင်မြင်သော ၁၈၆၈ စုဆောင်းမှုကိုအစိမ်းရောင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်ကြေးဝါအိတ်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောမော်ဒယ်သုံးမျိုးဖြင့်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ အချိန်ကာလတစ်ခုတည်းအဖြစ်၊ chronograph သို့မဟုတ်ကမ္ဘာ့အချိန်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်အတူ 'ပထဝီအနေအထား' အဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ ထိုသုံးမျိုးစလုံးအားနေတိုးပုံစံဖြင့်ရက်လုပ်သောလက်ပတ်နာရီနှင့်ဖုန်းနံပါတ်တူအရောင်တူစွာပေါင်းစပ်ထားသည်။ တောင်တက်လောက၏လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်သူတို့သည်ထိုတောင့်တသောခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကိုရှာဖွေရန်တောအုပ်၌သင်သွားသောအခါအကောင်းဆုံးသောအဖော်များဖြစ်သည်။ 🎄
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ကိုလည်းကြည့်ပါ Montblanc 1858 ဝဘ်ဆိုက်။ ယူရို ၂,၉၄၀ မှစျေးနှုန်း။
Hublot ဂန္ထဝင် Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski အနီရောင်ကြွေ
Hublot Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski အနီရောင်ကြွေထည် (အရင်းအမြစ်)
မီးထဲမှာမွေးဖွားခဲ့, သောစာသားဒီ Hublot နှင့်အတူအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကြွေထည်ပစ္စည်းများအားအပူချိန်အလွန်မြင့်မားပြီးဖိအားများများအောက်တွင်ပြုလုပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အလင်းနှင့်ခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းသည်အနီရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပွတ်တိုက်သည့်ကြွေထည်များသည် angular ဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်လိုက်ဖက်သည်။ ဒီလက်ပတ်နာရီကို Hublot နှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သည့်ခေတ်သစ်ပြင်သစ်အနုပညာရှင် Richard Orlinski ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Red Ceramic သည် Santa ကိုယ်တိုင်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်ပတ်နာရီဖြစ်သော်လည်းမီးဖိုရှေ့တွင်သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစု၏ကုမ္ပဏီနှင့်ပျော်မွေ့သောအခါသင် ၀ တ်ရန် ပို၍ သင့်တော်သောအချိန်နာရီကိုစဉ်းစားမိပါသလား။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ကိုလည်းကြည့်ပါ Hublot website။ စျေးကတော့€ 24.000 ဖြစ်ပါတယ်။
Breitling ပရီးမီးယားလိဂ် B01 Chronograph 42 Bentley
Breitling Premier B01 Chronograph 42 Bentley (အရင်းအမြစ်)
Bentley ကဲ့သို့သောဗြိတိသျှအိုင်ကွန်ဖြင့်အလုပ်လုပ်သောအခါစုဆောင်းမှုတွင်အစိမ်းရောင်ဖုန်းခေါ် ဆို၍ နာရီတစ်လုံးထားရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ Breitling သည်လှပသော Premier B01 Chronograph 42 Bentley နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသည် ပို၍ ပျော်ရွှင်သည်။ အလိုအလျောက် chronograph လှုပ်ရှားမှုသည်ဤဂန္ထဝင်မှတ်တမ်းကိုရွေ့လျားစေသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ခေါ်ဆိုမှုကိုဗြိတိသျှပြိုင်ဘက်အစိမ်းရောင်ဖြင့်အနက်ရောင် subdials များနှင့် tachometer စကေးအတွက်အနက်ရောင် border နှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် chronograph ၏ဒုတိယလက်၏အစွန်အဖျားနှင့်တူညီသည်။ ဒါကဒီနာရီကိုသင်အချိန်မီဟုတ်၊ မဟုတ်ကြည့်ဖို့ဘယ်အချိန်မှာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေတယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ကိုလည်းကြည့်ပါ Breitling ဝဘ်ဆိုက်။ € 8.500 မှစျေးနှုန်း။
Bovet Virtuoso V ကို
Bovet Virtuoso V ကို (အရင်းအမြစ်)
Virtuoso V နှင့်အတူ Bovet သည်၎င်း၏အရည်အချင်းပြည့်ဝသောနည်းပညာအရည်အချင်းသာမကအနီရောင်နက်ရှိုင်းသောဤနာရီ၏လှပသောလက်ပတ်နာရီကိုပြသခဲ့သည်။ Bovet သည်အာရုံကိုအနိမ့်ဆုံးအဖြစ်သို့ရောက်အောင်ထိန်းထားနိုင်ပြီးခုန်ချိန်အတွက်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုနှင့်အထက်ရှိမိနစ်အနည်းငယ်မျှသောလက်များဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ကျန်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာပျော်မွေ့ရန်လှပသောဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းပင်။ ဒီလက်ပတ်နာရီရဲ့လှပမှုကသင်ဟာ၎င်းရဲ့လှည့်ပတ်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်လည်ပတ်နိုင်ပြီး၎င်း၏ Tourbillon နှင့်လှုပ်ရှားမှုကိုထိုးထွင်းသိမြင်ရုံသာမကအချိန်ကိုရိုးရာနည်းလမ်းဖြင့်ဖော်ပြသည့်အပိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ကိုလည်းကြည့်ပါ Bovet 1822 ဝဘ်ဆိုက်။ စျေးနှုန်း +/- € 68.500 ယူရို။
reading ဆက်ဖတ်ရန်? ဒီကိုလည်းကြည့်ပါ ကန့်သတ်နာရီ.
Ablogtowatch အပါအ ၀ င်ရင်းမြစ်များEN), Beautifullife (EN), Haute အချိန် (EN), Horbiter (EN), မိုနိုခရုမ် (EN), TopGear (NL)
10.000 - 20.000 EURO20.000 - 50.000 EURO2500 - 5000 EUROကန့်သတ် Edition ကိုနာရီဆွစ်နာရီ
အဆိုပါ Samsung ရဲ့ Galaxy စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Active ကို2မျှော်မှန်းထားသည်ထက်အစောပိုင်းကလာ
အသစ်က Galaxy စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Active2 ယခုတစ် ပို. ပင်ကိုယ်ပိုင် display နှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးသစ်ကိုကြည့်ဖို့ရှိပါတယ်။ သင်အလိုရှိအခါတိုင်းသင်ဟာတိကျမှန်ကန်ကျန်းမာရေးအကဲဖြတ်ရနှင့်သင်အပြည့်အဝချိတ်ဆက်နေဖို့။ သငျသညျယခု running သို့မဟုတ်က Galaxy စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Active2 နှင့်အတူထိုင်ရန်သင့်လာမယ့်နောက်ဆုံးနေ့မှာနေပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်။
စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်း: LVMH ဇိမ်ခံဖက်ရှင်အိမ်သည် Tiffany & Co. နှင့်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည် $ 16,2 ဘီလီယံနဲ့ဝယ်ဖို့
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ LVMH ဇိမ်ခံပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်လူသိများသော Tiffany & Co. အမေရိကန်ကုမ္ပဏီကို 1837 တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး LVMH သည်အီလက်ထရွန်းနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကိုအမြဲတမ်းတည်ထောင်မည့်နေရာတွင်ထွက်ပေါ်လာသော omni channel မဟာဗျူဟာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ယင်းနမူနာဘုရင်: နောက်ဆုံးပေါ်ရန်း Seiko အားကစားငွေကောက်ခံ SBGA405 ဂုဏ်ထူး Godzilla ၏ tastefully အများဆုံးအထင်ကရယခုအချိန်တွင်ကြည့်ပါ။
Godzilla 65 ၏နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အထူးအသစ်များကိုထုတ်ဝေ။ တစ်ဦးကမူထူးခြားတဲ့ရန်း Seiko နာရီ။ 650 အပိုင်းပိုင်း၏လီမိတက် edition ။ စျေး +/- € 11.500 ယူရို။ ရရှိနိုင်နိုဝင်ဘာလ 2019 ။
အဆိုပါအီးမေးလ်လိပ်စာကိုထုတ်ဝေမည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တောင်းဆိုနေတဲ့လယ်ယာမှတ်သားထားတဲ့ * *
ငါ့နာမကို, အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် website ကိုငါမှတ်ချက် post နောက်တစ်ကြိမ်အဘို့ဤဘရောက်ဇာကိုစောင့်ရှောက်။
အသစ်နှင့်အထူးလှပသော Panerai Luminor Marina Carbotech ™ ၄၄ မီလီမီတာ
လေတပ်မှစစ်မှုထမ်းဟောင်းတစ် ဦး သည် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် Rolex Daytona အတွက်ယူရို ၃၀၀ ခန့်ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ အခုတော့ယူရို ၇၀၀,၀၀၀ တန်လိမ့်မယ်
Zenith သည် Defy Midnight နှင့် Land Rover ထုတ်ဝေသောနာရီအသစ်များကိုပြသခဲ့သည်
Seiko သည် Prospex The Black Series Limited Edition ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Big Bang Meca-10 ၏ Hublot စိတ်ဓာတ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း
binh vinh danh op ရစ်ချတ် Mille နာရီသည် Pharell Williams နှင့် ပူးပေါင်း၍ သူ၏အိပ်မက်များကိုစာသားအတိုင်းလိုက်နာသည်
ကျနော်တို့နေ့စဉ်အအေးဆုံးလက်ပတ်နာရီသတင်းများ, နောက်ခံ, အဆင်းလှနာရီ, အနုပညာရှင်နာရီ, လက်ပတ်နာရီကိုအကြံပေးချက်များနှင့်ကမ္ဘာအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏အကြောင်းကြား Cool နာရီအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆောင်ကြဉ်း!
- 1000 EURO မှ 10.000 - 20.000 EURO 20.000 - 50.000 EURO 100.000 EURO သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို 1000 - 2500 EURO 2500 - 5000 EURO 5000 - 10.000 EURO အမေရိကန် Audemars Piguet အော်တိုလက်ပတ်နာရီ တတ်နိုင်နာရီ Breitling Casio celebrity chronograph တစ်ရက်အရိပ်အယောင် Ladies နာရီ ရေငုပ်သမား Watch ကန့်သတ် Edition ကိုနာရီ သမိုင်း ယောက်ျားရဲ့နာရီ Hublot အီတလီ IWC Schaffhausen ဂျပန် ဝယ်လမ်းညွှန် သားရေ watchband တပ်အားကစားလက်ပတ်နာရီ အိုမီဂါ စစ်တမ်း Panerai Patek Philippe လေယာဉ်မှူးကလက်ပတ်နာရီ ပါဝါစရံ Quartz ရစ်ချတ် Mille Rolex ရော်ဘာသိုင်းကြိုး Seiko အရိုးစု စမတ်နာရီ အားကစားနာရီ သံမဏိ watchband tag ကို Heuer ဆွစ်နာရီ
Previous post: ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ရုံဖြင့် Breitling နာရီသစ် Aviator 8 B01 Chronograph 43 ခြင်များ
လာမယ့် post: ယူရို ၁၈,၂၀၀ မှ Limited Edition Montblanc နာရီ၌စပျစ်သီးပြွတ်နာရီနှင့်ဆော်လမွန်အရောင်တောက်ပသောနာရီတစ်လုံးရှိသည်
Cool Watches.eu အကြောင်း
နောက်ဆုံးပေါ်လက်ပတ်နာရီသတင်းများ, အကြံပေးချက်များနှင့်နောက်ခံနေ့စဉ်နာရီလည်ပတ် Cool!
Hamilton ၏လက်တွဲလုပ်ဆောင်မှု - Khaki Pilot Schott NYC Limited Edition လေယာဉ်မှူးနာရီသည်စစ်ရေးနောက်ခံနှင့်စတိုင်ရှိသည်
Casio နာရီအသစ် - G-Shock "Full Titanium" ကင်မရာကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
အဘယ်ကြောင့် Rolex Sky-Dweller 326933 သည်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်
Hublot Big Bang Scuderia Ferrari 90th နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်
ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖန်တီးပါ - WEB360.nl